Space Light Co., Ltd., Myanmar, Mandalay, Chan Aye Thar Zan Township | Mandalay Directory | Myanmar Business Directory | Advertise in Mandalay | Mandalay Yellow Pages
အမှတျ အေ-၇၊ (၆၀)လမျး၊ (၃၁)လမျး နှငျ့ (၃၂)လမျး ကွား၊ ရတနာတိုငျးပွညျအိမျယာ၊, ခမျြးအေးသာစံမွို့နယျ, မန်တလေးတိုငျးဒသေကွီး
Space Light Company Limited continues to move forward and becomealeading electrical and electronic manufacturing and trading company group in Myanmar. Intend to formajoint venture company with good foreign companies for manufacturing electrical and electronic parts by CMP (Contract Manufacturing Practice) system.
အမြို့မြို့အနယ်နယ်ရှိ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းဆိုင်များတွင် ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ မီးအားအခြေအနေနှင့် အသင့်တော်ဆုံး ဗီယက်နမ်နိုင်ငံထုတ် Servo Type ဗို့အားမြင့်စက် 5နှစ်အာမခံ